14 Futhi ngabona, bheka! iWundlu+ limi eNtabeni iZiyoni,+ kumi kanye nalo abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane+ kulotshwé igama lalo negama likaYise+ emabunzini abo. 2 Ngezwa umsindo uvela ezulwini unjengomsindo wamanzi+ amaningi nanjengomsindo wokuduma okukhulu kwezulu; umsindo engawuzwa wawunjengowabahlabeleli futhi beshaya amahabhu abo.+ 3 Bayahlabelela,+ behlabelela okungathi yingoma entsha+ phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kwezidalwa ezine eziphilayo+ nabadala;+ futhi akekho owakwazi ukuyazi kahle leyo ngoma ngaphandle kwabayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane,+ abathengwé+ emhlabeni. 4 Laba yibo abangazange bazingcolise ngabesifazane;+ eqinisweni, bayizintombi.+ Laba yibo abaqhubeka belandela iWundlu kungakhathaliseki ukuthi liyaphi.+ Laba bathengwa+ kubantu njengolibo+ kuNkulunkulu neWundlu, 5 futhi akukho manga atholakala emilonyeni yabo;+ abanasici.+ 6 Ngabona enye ingelosi indiza emkhathini,+ inezindaba ezinhle+ zaphakade ukuba izimemezele njengezindaba ezithokozisayo kwabahlala emhlabeni, nakuzo zonke izizwe nezinhlanga nezilimi nabantu,+ 7 ithi ngezwi elikhulu: “Mesabeni uNkulunkulu+ nimnike inkazimulo,+ ngoba ihora lokwahlulela kwakhe selifikile,+ ngakho khulekelani Lowo owenza+ izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi.”+ 8 Nenye ingelosi, eyesibili, yalandela, yathi: “Liwile! IBhabhiloni+ Elikhulu liwile,+ lona elenza ukuba zonke izizwe ziphuze iwayini+ lentukuthelo yobufebe balo!”+ 9 Nenye ingelosi, yesithathu, yazilandela, ithi ngezwi elikhulu: “Uma umuntu ekhulekela isilo sasendle+ nomfanekiso waso,+ amukele uphawu ebunzini lakhe noma esandleni sakhe,+ 10 uyophuza newayini lentukuthelo kaNkulunkulu elithululelwa endebeni yolaka lwakhe lingahlanjululiwe,+ ahlushwe+ ngomlilo nesibabule+ emehlweni ezingelosi ezingcwele nasemehlweni eWundlu. 11 Umusi wokuhlushwa kwabo unyuka kuze kube phakade naphakade,+ futhi abanakho ukuphumula imini nobusuku, labo abakhulekela isilo sasendle nomfanekiso waso, nanoma ubani owamukela uphawu+ lwegama laso. 12 Lapha kulapho kusho khona ukukhuthazela kulabo abangcwele,+ abagcina imiyalo kaNkulunkulu+ nokholo+ lukaJesu.” 13 Ngezwa izwi livela ezulwini lithi: “Loba: Bayajabula abafileyo,+ abafa bemunye neNkosi+ kusukela kulesi sikhathi kuqhubeke.+ Yebo, kusho umoya, mabaphumule emishikashikeni yabo, ngoba izinto abazenza ziyabalandela.” 14 Ngabona futhi, bheka! ifu elimhlophe, phezu kwalo kuhlezi othile onjengendodana yomuntu,+ enomqhele wegolide+ ekhanda nesikela elibukhali esandleni sakhe. 15 Kwaqhamuka enye futhi ingelosi iphuma endlini engcwele yethempeli, imemeza lowo ohlezi efwini ngezwi elikhulu, ithi: “Faka isikela lakho uvune,+ ngoba selifikile ihora lokuvuna, ngoba isivuno+ somhlaba sesivuthwe ngokuphelele.”+ 16 Ohlezi phezu kwefu walifaka isikela lakhe emhlabeni, umhlaba wavunwa. 17 Kwaqhamuka nenye futhi ingelosi iphuma endaweni engcwele yethempeli ezulwini,+ nayo iphethe isikela elibukhali. 18 Kwaqhamuka nenye futhi ingelosi iphuma e-altare, inegunya phezu komlilo.+ Yamemeza leyo eyayiphethe isikela elibukhali ngezwi elikhulu, yathi: “Faka isikela lakho elibukhali ubuthe amahlukuzo omvini womhlaba,+ ngoba izithelo zawo sezivuthiwe.” 19 Le ngelosi+ yalifaka isikela layo emhlabeni yawubutha umvini+ womhlaba, yawuphonsa esikhamweni sewayini esikhulu sentukuthelo kaNkulunkulu.+ 20 Isikhamo sewayini sanyathelwa ngaphandle komuzi,+ kwaphuma igazi esikhamweni sewayini lakhuphuka laze lafika ematomwini amahhashi,+ ibanga elingamastadiyu ayinkulungwane namakhulu ayisithupha.+